Uru na ọghọm nke mkpọsa mgbasa ozi abụọ | Martech Zone
Ndị ahịa anaghị enwe ndidi iji dozie igbe nnabata. Ha na-ejuputa ha na ozi ahia kwa ubochi, nke otutu n’ime ha edeghi aha na mbu.
Dị ka International Telecommunication Union, 80 pasent nke azụmahịa zuru ụwa ọnụ nke e-mail nwere ike nkewa dị ka spam. Ọzọkwa, nkezi ọnụego email na-emeghe n'etiti ụlọ ọrụ niile daa n'agbata pasent 19 ruo 25, nke pụtara na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị debanyere aha adịghị echegbu onwe ha pịa ahịrị isiokwu.
Otú ọ dị, eziokwu ahụ bụ na ahịa email ahụ bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji zube ndị ahịa. Ahịa email bụ usoro kachasị mma maka ịbawanye ROI, ọ na-enyekwa ndị na-ere ahịa aka iru ndị na-azụ ahịa n'ụzọ kwụ ọtọ.
Ndị na-ere ahịa chọrọ ịgbanwe ndu ha site na email, mana ha achọghị itinye ha nsogbu na-akpasu ha iwe site na ozi ha ma ọ bụ hapụ ha dị ka ndị debanyere aha. Otu n'ime ụzọ iji gbochie nke a bụ ịchọ a nnweta abụọ na-abanye. Nke a pụtara na mgbe ndị debanyere aha debara aha ha na gị, ha ga-akwado nkwenye ha site na email, dị ka a hụrụ n'okpuru:
Ka anyị leba anya na uru na ọghọm nke opt-ins abụọ, ka ị nwee ike ikpebi ma ọ kacha mma maka mkpa gị na azụmaahịa gị.
Ga-enwe ndị debanyere aha pere mpe, mana ndị ka elu
Ọ bụrụ na ị na-amalite site na email, ị nwere ike ịchọrọ ilekwasị anya n'ihe mgbaru ọsọ dị mkpirikpi ma mepụta ndepụta gị. Ntinye aka nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma n'ihi na ndị ahịa na - enweta a 20 na 30 percent ngwa ngwa na ndepụta ha ma ọ bụrụ na ha chọrọ naanị opt-in.
Ndabere nke ndepụta a buru ibu, otu nhọrọ aha bụ eziokwu bụ na ndị a abụghị ndị debanyere aha dị mma. O yighị ka ha mepee email gị ma ọ bụ pịa site na ịzụta ngwaahịa gị. Ntinye abụọ na-achọpụta na ndị debanyere aha gị nwere ezigbo mmasị na azụmahịa gị na ihe ị ga-enye.
You'll ga-ekpochapụ ndị debanyere aha adịgboroja ma ọ bụ na-ezighi ezi
Mmadu na eleta webusaiti gi ma nwee mmasi na idebanye aha nke email gi. Agbanyeghị, ọ bụghị ya bụ onye ederede kachasị mma ma ọ bụ na ọ naghị a attentiona ntị, yana agwụ elu ndenye ozi na-ezighi ezi. Ọ bụrụ n’ịkwụ ndị debanyere aha gị ụgwọ, ị nwere ike tufufu nnukwu ego site na ozi ịntanetị ọjọọ ha.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ izere iziga na adreesị ozi-e na-ezighi ezi ma ọ bụ nke ezighi ezi, ị nwere ike ime nhọrọ abụọ, ma ọ bụ tinye igbe nkwenye email na ntinye aka, dị ka Old Navy, mere ebe a:
Ọ bụ ezie na igbe nkwenye email bara uru, ha anaghị arụ ọrụ dị ka ọpụpụ abụọ ma a bịa n'ịwepụ ozi ịntanetị na-adịghị mma. Ọ bụ ezie na ọ dị obere, mmadụ nwere ike debanye aha enyi gị maka listi email, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enyi ahụ arịọghị ịpụ. Ntinye abụọ ga-eme ka enyi ahụ wepu aha na ozi ịntanetị achọghị.
Technology ga-achọ nkà na ụzụ ka mma
Ntinye abụọ nwere ike ịkwụ ụgwọ karịa, ma ọ bụ chọọ teknụzụ karịa, dabere na otu ị họọrọ iji zụọ ahịa email gị. Ọ bụrụ n ’ị na-ewukwasị nyiwe nke gị, ị ga-achọ itinyekwu oge na akụrụngwa n’ime ndị otu IT gị ka ha nwee ike iwulite usoro kachasị mma. Ọ bụrụ na ị nwere onye na-eweta email, ha nwere ike ịgba gị ụgwọ dabere na ole ndị debanyere aha ị nwere ma ọ bụ ozi ịntanetị ị zitere.
Enwere ọtụtụ nyiwe ozi ịntanetị dị n'ebe ahụ nke nwere ike inyere gị aka mejuputa mkpọsa gị. You'll ga-achọ ịhọrọ nke dabara na ebumnuche gị, nwee ahụmịhe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ gị, ọ ga-adaba na mmefu ego gị.
Cheta: Ọ bụrụ n ’ịbụ obere azụmaahịa, ịchọghị onye na - eweta ahịa email kachasị amasị gị, nke kachasị ọnụ. Na-achọ ịda n’ala, ọbụnadị ikpo okwu n’efu ga-eme ugbu a. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ nnukwu ụlọ ọrụ, ma ị na-achọ iwulite mmekọrịta bara uru n'etiti gị na ndị ahịa, ị kwesịrị ịgbapụta maka onye nyere gị kacha mma.
You na-eji okpukpu abụọ ma ọ bụ otu ọpụpụ? Kedu nhọrọ kachasị mma maka azụmaahịa gị? Mee ka anyi mara na ngalaba a
Tags: nnweta abụọ na-abanyeokpukpu abụọ opt-in emailnbanye emailNwepu akwukwoịpụ na